Faah-faahin dheeraad oo ku saabsan duqeyn ka dhacday Gedo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Faah-faahin dheeraad oo ku saabsan duqeyn ka dhacday Gedo
Faah-faahin dheeraad oo ku saabsan duqeyn ka dhacday Gedo
Gedo (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahino dheeraad ah ka soo baxaya duqeyn diyaaradeed oo xalay ka dhacday deegaanno ka tirsan Gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab.
Dadka deegaanka ayaa ku soo warramaya in ay xalay maqlayeen Jug Culus oo gantaalo ah, sidoo kalena ay arkayeen diyaarado joog hoose ku socda, isla markaana ay dareem cabsi xoogan.
Duqeynta ayaa waxa ay ka dhacday duleedka deegaanka Ceelcadde ee Gobolka Gedo, halkaasi oo sida la sheegaayo lagu duqeeyay mintidiinta Ururka Al-Shabaab.
Lama oga ilaa iyo hadda Khasaaraha ka dhashay duqeyntii ka dhacday deegaan ku yaalla duleedka Ceelcade ee Gobolka Gedo, halkaas oo geed fadhi u aheyd saraakiisha Al-Shabaab ee gobolkaasi.
Si kastaba, diyaaradaha dagaalka ayaa inta badan duqeymo la beegsada deegaannada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab, walow inta badan khasaaraha uu gaaro dadka shacab ah ee deegaanadaasi.
Duqeyn ka dhacday Gedo